Soosaaraha budada Shiinaha Quartz iyo Alaab-qeybiye | Dinglong
Budadayada 'quartz' waxay ka sarreysaa 99.3% crystalline waxayna leedahay wasakh yar oo ionic ah iyo qiiqa yar ee alfa-ga. Budada Quartz waxay bixisaa noocyo kala duwan oo muuqaal ah, farsamo iyo kuleyl leh. Waxaa lagu heli karaa labadaba heerarka caadiga ah iyo qaybinta cabbirka cabbirka.
Codsiyada: Elektaroniga, Semiconductor, Quartz ware, Refractories
Budada quartz saafi ah (99.3% crystalline)
Nijaasta ionic yar iyo qiiqa raajada alfa yar
Kimistari joogta ah iyo qeybinta cabbirka walxaha oo si taxaddar leh loo xakameeyay
Dinglong quartz powders waa bur loo isticmaalo elektarooniga, alaabada quartz, diidmada iyo codsiyada kale ee gaarka ah. Sababtoo ah daahirnimada budada quartz, xasiloonida kiimikada ee aadka u fiican iyo qaybinta cabbirka walxaha oo si taxaddar leh loo ilaaliyo, waxaa si aad ah looga dalbaday warshado kala duwan.
Loo Adeegsaday Laguna Kalsoonyahay Warshadaha oo dhan
Budada quartz Dinglong waa 99.3% crystalline. Qiyaasta 99.3%, budadaas quartz waxay leeyihiin wasakh yar oo ionic ah, qiiqa alfa-ga oo hooseeya iyo kiimikada joogtada ah. Budadayada quartz-ka waxaa isticmaala oo aaminay macaamiisheenna gudaha iyo dibaddaba maxaa yeelay geeddi-socodka wax soosaarkayaga ayaa loogu talagalay kalsoonida iyo waafaqsanaanta, gacan ka geysashada hubinta waxqabadka alaabada la isku halleyn karo iyo soo noqnoqoshada taasoo keeneysa wax soo saarka budada quartz oo ah 99.3% saafi ah. Sidaa darteed, macaamiisheennu waxay awood u leeyihiin inay dhisaan kalsooni iyo saaxiibtinimo annaga oo aan ku tiirsanaano wax soo saarkeenna.
Dinglong wuxuu awood u leeyahay inuu soo saaro budo quartz ah oo leh dhowr qaybood oo qaybinta cabbirka kala duwan ah iyada oo la adeegsanayo dhowr warshadood oo kubbadda laga soo saaro. Waxay u oggolaaneysaa dabacsanaanta inay soo saarto waxyaabo leh tiro ballaadhan oo qaybinta cabbirka. Budada Dinglong silica waxaa laga heli karaa 2,200 lbs. (1,000 kg) jawaano cufan.
Budadahan silica waxaa lagu soo saaray xarun la xaqiijiyay oo ku taal Lianyungang, Shiinaha. Muddo 30 sano ah oo la aasaasayey, Dinglong wuxuu kasbaday taageero farsamo iyo farsamo oo xoog leh iyo khibrado aad u tiro badan oo lagu soo ururiyey soosaarida agab quartz ah Hawlaheena wax soo saar waxaa loo habeeyay isku waafaqsanaanta iyo isku halaynta - caawinta hubinta tayada iyo qiimaha wax soo saarka la isku halleyn karo. Waxaan aaminsanahay in alaabooyinka la isku halleyn karo ay naga caawin karaan helitaanka iibinta hoggaaminta iyo dhisidda kalsoonida iyo saaxiibtinimada macaamiisheenna.
Hore: Budada Silica
Xiga: Quartz Tube
Budada Quartz Powder
Nadiif Sare Quartz Powder
Budada Quartz ee Iibinta
Soosaarayaasha budada Quartz
Budada Silica Quartz